> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Xogta laga isakoo Store
Sidee ayaan u soo kaban karto xogta ka isakoo Store xasuusta ul?
Waxaan leeyahay, isakoo Store ah 'n' Go Red 4G ul xasuusta. My Windows 7 computer joojiyay aqoonsiga aan drive ee lama filaan ah. Mar kasta oo aan isku dayaan in ay u furo, farriin ii sheegay in drive kama formatted. Waxaan soo jeediyay in ay qaab. Fadlan ii caawin! Anigu waxaan ahay hawlgal ay ku leeyihiin oo xogta u qiimo badan oo ku saabsan ul xusuusta aan. Waxaan u baahanahay dib xogta. Thanks ka hor.
Marka soo food saartay arrinta digital khasaaro xogta, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in aad ka fikirto waa in ay joojiyaan isticmaalka flash iyo soo kabashada heli software xogta internet-ka. In aad arrin, xalka waa isku mid. Waxaad ka isakoo Store xasuusta ul soo celin karaa macluumaadka ka hor inta aadan go'aansan in ay qaab.
Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Waa awood kabsado dhammaan xogta oo qaali ah oo xasaasi ah ka flash drive, ul soo xusuusta, telefoonka gacanta, drive computer adag, iwm
Intaa waxaa dheer, waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery in baarista qalab lagu kaydiyo, isakoo Store si aad u hubiso haddii files helay by yihiin waxa aad u sii socotay inay dib u soo ceshano ama aan.
Qabtaan isakoo Store Recovery in 3 Talaabooyinka
Ka hor inta fulinaya dib u soo kabashada, fadlan hubi in aad isakoo Store waxaa laga garan karaa your computer iyo aad badiyay xogta aan ku soo aroorin by files cusub waxa ku jira.
Halkan aynu isku dayi Wondershare Data Recovery for Windows wada. Bilow Wondershare Data Recovery oo qarka u saaran suuqa kala ah in "Standard Mode", barnaamijka wuxuu muujin doonaa 3 hababka soo kabashada. Si aad u soo ceshano xogta lumay ka qalab lagu kaydiyo, isakoo Store, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode.
Tallaabada 2 baarista, isakoo Store u Khasaaray Files
Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive ay ku adag tahay qalab lagu kaydiyo, isakoo Store ka dibna riix "Start" si ay u iskaan.
Fiiro gaar ah: Waxaad go'aansan kartaa "Enable Deep Scan" loogu natiijo iskaanka fiican, laakiin waxa ay qaadataa waqti dheer iyo magaca asalka ah file aan la soo bandhigi doonaa. Waxaa kuu wanaagsan inaad dooranayaan haddii scan caadiga ah ma lagu ogaado waxa aad ka lumay.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo ka isakoo Store Ladnaansho Khasaaray Files
Scan ka dib, natiijada iskaanka lagu soo bandhigi doonaa qaybaha sida "sawiro", "email", "videos", iwm Waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan sawirada iyo document files ka hor soo kabashada. Plus, waxa kale oo aad eegi kartaa waddada faylka ay bedesheen natiijada iskaanka in ay "jidka".
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" si ay u sii on your computer.
Fiiro Gaar ah: waxaa muhiim ah in lagu badbaadiyo files soo kabsaday in qalab lagu kaydiyo cusub ama iyaga ku badbaadin on your computer. Si toos ah iyaga badbaadiya in qalab lagu kaydiyo, isakoo Store keeni karo xogta overwritten.
3 talaabooyin fudud inuu ka soo kabsado card SD formatted